के तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ ? नौ वर्ष उपचार गर्दा निको नभएको रोग झाँक्रीले निको बनाएको भन्दै आइन् यि युवती (भिडियो सहित)
Homeसमाचारके तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ ? नौ वर्ष उपचार गर्दा निको नभएको रोग झाँक्रीले निको बनाएको भन्दै आइन् यि युवती (भिडियो सहित)
April 12, 2021 admin समाचार 3745
तपाईलाई धामी झाँ’क्रीमा विश्वास लाग्छ ? अहिलेको २१ औं शताब्दिमा पनि धार्मी झाँक्री माथि वि’श्वास गर्नुलाई अन्ध’विश्वास भनिन्छ । तर विश्वास एउटा यस्तो चिज हो जहाँ बिरामीको ८० प्रतिश’त रोग विश्वासले निको हुन्छ । एक युवती ९ वर्ष देखि विरामी थिइन् । उनले अनेक ठाउँमा उ’पचार गरिन् तर उनी निको भइनन् । तर एक जना झाँक्रीले ९ वर्ष देखि लागेको उनको रोग निको बनाए’को दावी गरिएको छ ।
सञ्चो भएपछि यु’वतीले आफ्नो जिवनमा आश्चर्य भएको बताएकी छन् । म निकै खुसी छु, ९ वर्ष सम्म सञ्चोे नभ’एको रोग झाँक्रीले निको बनाएको बताएकी छन् । काठमाडौमै भएको यो घटना उदेकलाग्दो छ । अहिले धामी झां’क्रीको विश्वास नगर्न र विरामी भए अस्पताल जान चिकित्सक र सा’माजिक अगुवाहरुले भनिर’हँदा पनि धामी झाक्रीको विश्वासमा पर्ने संख्या ठुलो छ । विश्वासकै कारण होला वा केही जडिवुटीले गरेको सका’रात्मक प्रभावले केही वि’रामी निको पनि हुने गरेका उदाहरण छन् ।
तर त्यस्ता घटनाले यस्तो अन्धवि’श्वासमा थप विश्वास बढाउने गर्छ । यो भिडियोमा पनि धामीले ९ वर्ष देखि निको नभएको रोग झाँक्रीले निको बनाएको दावी गरि’एको छ । विरामी रहकी युवतीले आफु निको भएको बताएकी छन् । लामो समय सम्म रोग पालेर बस्नु प’रेको थियो । अहिले म निको भए उनले भनेकी छन् । अरुणा तामागं नाम गरेकी युवतीले आ’फुलाई ३ वर्ष देखि अति भएपछि आफु धामी’कोमा आएको बताइन् । इताजा खबरबाट
धुर्मुसले रङ्गशाला चन्दा मागेर बनाउन सक्दैन भनेर बि’रोध गर्दा तारा बराललाई कस्ले दियो यस्तो धम्की ? (भिडियो सहित)
कोरोना अपडेट : ३४७९ जना संक्र’मित थपिए, ६६३६ जना निको भए
June 6, 2021 admin समाचार 2729
पछिल्लो २४ घ’ण्टामा थप ३४७९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । १० हजार ४७१ जनाको पीसी’आर परीक्षण गर्दा ३०२४ जना तथा ३२६२ जनाको एन्टि’जेन परीक्षण गर्दा ४५५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । यही अवधिमा
यी किशोर , जसलाई बाँदर भनेर ढुंगाले हि’र्काउँछन्…
October 31, 2020 admin समाचार 8437
छिमेकी मुलु’क भारतका १३ वर्ष’का ललित पाटिदार अनौठो रोग’बाट पी’डित बनेका छन् । १३ वर्षको क’लिलो उमेरमै उनको अनु’हारभरी कपाल पलाएको छ । वेरउल्फ सिन्ड्रो’म रोगका कारण उनको अनुहा’रभरी कपाल पलाएको चिकित्स’कहरुले बताएका छन् ।
गायक प्रकाश सपूतको जन्मदिन आज, कति वर्ष पुगे प्रकाश ? थाहा पाउनुहोस्
September 14, 2020 admin समाचार 12252
पछिल्लाे समय निकै चर्चा कमा’एका नेपाली निकै लोक’प्रिय गायक प्रकाश सपूतको आज जन्म दिन परेको छ । जन्म-दिनको अवसरमा गायक सपूतलाई आफन्त शुभ’चिन्तक तथा फ्यानहरुले बिहानै’देखि शुभकामना ब्यक्त गरिरहेका छन् । गायक सपूतको जन्म बाग्लुगंमा
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (223019)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (215035)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (214711)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (213002)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (211885)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (210829)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (209330)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (195039)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (177992)